» पुरुषमा किन हुन्छ प्रजनन् स्वास्थ्य समस्या ?
पुरुषमा किन हुन्छ प्रजनन् स्वास्थ्य समस्या ?
१७ पुष २०७६, बिहीबार १८:१०
प्रजनन् स्वास्थ्य समस्या महिला र पुरुष दुवैमा हुन्छ । नेपाली समाजमा प्रजनन्सँग सम्बन्धी समस्या भयो भने सबैभन्दा पहिले महिलालाई नै बुुझ्ने गरिन्छ ।
हालै गरिएको एक अध्ययन अनुसार विश्वमा ५५ प्रतिशत पुरुष प्रजनन् स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित भएका छन् । डेनमार्कको आरहुस यूनिभर्सिटीका प्राध्यापक एनी थोरस्टेडका अनुसार खराब वातावरण भ्रुणको स्पर्म उत्पादन र प्रजनन् अङ्गको विकासका लागि हानिकारक हुन सक्छ ।
कम तौल भएर जन्मिने बच्चामा ठूलो भएपछि फर्ट्लिटीको समस्या हुने गरेको लण्डनले गरेको अध्ययनमा पाइएको छ । अध्ययनमा सामान्यदेखि १० प्रतिशत कम तौल भएका ५५ प्रतिशत मानिसमा यो समस्या भएको पाइयो ।
जुन अध्ययनमा महिलालाई सहभागि गराइएको थिइएन । रिसर्च टीमका अनुसार यस अध्ययनमा कस्ता स्वास्थ्य समस्या भएकालाई सहभागि गराइयो त्यो पनि महत्वपूर्ण रहेको छ ।
प्राध्यापक थोरस्टेडले गर्भवति महिलाले धूम्रपान गर्ने गरेको अवस्थामा त्यसको प्रत्यक्ष असर गर्भमा रहेको शिशुमाथि पर्न जान्छ । शुरुआतमै बच्चामाथि यसको असर नदेखिएपनि लामो समयपछि बच्चाको शरीरमा यसको गलत असर देखिन थाल्छ ।
अध्ययनमा १९८४ देखि १९८७ का बीचमा जन्मेका ५ हजार ५ सय ९४ जना पुरुषलाई सहभागि गराइएको थियो । अध्ययनकर्ताले ८ दशमलव ३ प्रतिशत मानिसको तौल आफ्नो जन्मको समय २ दशमलव ८ किलोग्राम थियो उनमा पछि गएर प्रजनन् स्वास्थ्यको समस्याबाट गुज्रिनु परेको थियो । आरहुसका अध्ययनकर्ताका अनुसार अध्ययनमा सहभागि सबै अहिले ३० देखि ४० उमेर समूहका छन् ।
देशभर पछिल्लो २४ घण्टामा थप ३ सय ५१ जनामा कोरोना पुष्टि
मंगलवार मकवानपुरमा एक जनाले जिते कोरोना
मंगलवार मकवानपुरमा ४ जनामा कोरोना पुष्टि
देशभर पछिल्लो २४ घण्टामा थप ३ सय ८५ जनामा कोरोना पुष्टि